Nhau - Chii chinonzi hexagonal waya mesh
Hexagonal waya pajira riya imwe waya pajira riya pamwe hexagonal hole.This mhando hexagonal waya pajira riya rakarukwa nesimbi waya, yakaderera kabhoni simbi waya kana Stainless simbi waya.Pamusoro kurapwa kunogona kuve kwemagetsi kwakakurudzira (inonziwo kutonhora kwakakurudzira), kupisa kwakanyikwa kwakakurudzira. Kana iwe ukasarudza inopisa yakanyikwa kwakakurudzira, pane maviri masitaera: imwe inopisa yakanyikwa kwakakurudzira usati waruka, imwe inopisa inopisa yakanyikwa kwakakurudzira mushure kwekuruka.
Kudzivirirwa kwePVV kuchawedzera zvakanyanya kushandisa kwehupenyu hwetambo mesh.Uye kuburikidza nesarudzo yemavara akasiyana inogona kubatanidzwa pamwe neyakatenderedza zvakasikwa nharaunda.
Hexagonal waya pajira riya inogona rakakamurwa chiedza hexagonal waya pajira riya uye rinorema hexagonal waya mesh.Light hexagonal waya mambure inozivikanwawo sehuku keji, rinorema hexagonal waya pajira riya inozivikanwawo seibwe keji mambure.
Naizvozvo, kwakakurudzira hexagonal waya pajira riya uchishandisa waya dhayamita ye03mm kusvika 2.0mm; pvc yakavharwa mapurasitiki hexagonal mambure achishandisa waya dhayamita ye08mm kusvika 2.6mm yepvc simbi waya. kuitwa mubatanidzwa uye mbiri.
Iyo inowanzo shandiswa mumaindasitiri, kuvaka uye zvekurima.Iyo zvakare inoshandiswa zvakanyanya sefence.Kufanana nehuku keji, kuchengetedzwa kwemhuka.Kana iwe uchida kushandisa yakakomberedzwa waya mesh seye yako yekisimusi kushongedzwa, zvakanaka sarudzo.Anyway, iwe unogona kusarudza zvinoenderana zvaunoda.
2.Strong kugona kurwisa zvakasikwa kukuvara ngura kuramba uye kuramba kune yakaipa mamiriro ekunze.
3.Can inomira yakasiyana siyana deformation, asi zvakadaro isinga donhe.
4.Excellent muitiro hwaro chendangariro zvakafanana zvakafanana unhani ukobvu uye simba ngura nemishonga.
5.Save pamari yekufambisa. Inogona kudonhedzwa kuita madiki rolls uye yakaputirwa mune hunyoro-chiratidzo pepa, tora nzvimbo diki.
6.Mesh gomba rakanaka uye rakaenzana .Mesh kuvhura kunogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
1.Fixed chivakwa chemadziro, kupisa kupisa
2.Residential dziviriro, nzvimbo yekudzivirira
4.Dzivirira uye tsigira masvingo egungwa, makomo, migwagwa uye mabhiriji.